Amin'ny ankapobeny, ny politika dia faritana ho fanaraha-maso ny raharaham-pokonolona amin'ny alàlan'ny fanapaha-kevitra. Izay fitaomana na fampiharana ny tanjona sy fanapahan-kevitra amin'ny sehatra tsy miankina na miankina amin'ny fanjakana dia azo lazaina ho politika. Ao amin'ny fiarahamonintsika anefa, io teny io dia misy ifandraisany amin'ny sehatry ny daholobe.
Noho izany ny fiainam-bahoaka ny olom-pirenena, ny hetsika rehetra ho an'ny fitantanana vondrom-piarahamonina ary koa ny hetsika miaraka amin'ny vondrom-piarahamonina hafa dia azo lazaina ho politika.
Was ist Politik eigentlich? © magele-picture/ Adobe Stock
Amin'ny ankapobeny, ny politika dia ampiasaina hanoritana ireo firafitra, fizotrany ary atiny amin'ny fifehezana fanjakana. Raha tsorina, ny lalàna sy ny lalàna izay mampifanaraka ny fiainana dia ampandalovina amin'ny politika.
Ny filaminana, ny fahalalahana, ny fandriampahalemana, ny fahefana, ny ady, ny fitarihana ary ny rafitry ny fanjakana dia miankina amin'ny politika. Ka azo lazaina fa ny politika no fitaovana lehibe indrindra ampiasain'ny olombelona rehetra.
Kamo sy mpanao kolikoly ve ny mpanao politika?
Indraindray ny mpanao politika izay an'ny antoko samy hafa ao amin'ny fanjakantsika dia manana laza ratsy, satria tsy afaka mamaly ny filan'ny olona fotsiny izy ireo, fa manandrana mampiditra ny filàna sy ny filàna rehetra araka izay tratra. Na izany aza, tsy mandeha io, satria misy hevitra tsy mitovy amin'ny olona maro, izay tsy afaka hitodihana miaraka amin'ny fotoana iray.
Satria tsy afaka mamaly ny fanirian'ny olona iray ny mpanao politika, dia any amin'ny demokrasia i Alemana izay mandray ny fanapahan-kevitra ny ankamaroan'ny Bundestag. Ireo mpanao politika mipetraka ao amin'ny Bundestag dia voafidim-bahoaka. Izany no mahatonga ny antoko sy ny mpanao politika tsirairay hanana ampahany amin'ny faniriana sy filàn'ny olom-pirenena tsirairay avy, izay tsy afaka hamahana tanteraka.
Ny politika no fitaovana lehibe indrindra amin'ny fanjakana, satria raha tsy misy ny politika dia hisy korontana. Raha tsy mandeha ny rafitra politika misy eo amin'ny fanjakana dia miafara amin'ny ady na ady izany. Ohatra, ny ady an-trano dia mipoaka hatrany amin'ny kaontinanta afrikanina satria tsy mandeha ny rafitra politika any amin'ny firenena sasany.
Rafitra politika iray mahasalama no miantoka ny fizarana vola amin'ny alàlan'ny asa. Ankoatr'izay, miantoka fahalalahana ampy izany ary mamela ny hevitry ny olom-pirenena rehetra hiditra amin'ny politika. Izy io koa dia manome fotoana mitovy amin'ny fanabeazana ho an'ny olom-pirenena tsirairay. Ny rafitra politika miasa dia antsoina hoe demokrasia, izay ahitan'i Alemanina ny tenany ihany koa.
Zava-dehibe loatra noho izany ny politika satria miankina aminy ny fahamarinan'ny olona rehetra amin'ny fanjakana iray. Miankina amin'ny politika ihany koa ny hoavin'ny fiarahamonina na fiaraha-monina. Ao amin'ny rafitra demokratika, tafiditra ao ny feon'ny vahoaka ary mahatsapa ny ankamaroan'ny olona fa voatsabo ara-drariny izy ireo.
Amin'ny fitondrana jadona, ohatra, olona iray ihany no mandray ny fanapahan-kevitra lehibe rehetra momba ny fanabeazana, ny fahamarinana, ny fandriampahalemana ary ny filaminan'ny vondrom-piarahamonina. Na izany aza, tsy azo atao izany ary tsy ho ela na ho haingana dia tsy mahomby satria olona iray tsy afaka mamaly ny fitakian'ny olona rehetra amin'ny fotoana iray. Satria ny olona tsirairay dia ampahany amin'ny fiarahamonina ary miankina amin'izany, ny politika dia misy fiantraikany amin'ny olona tsirairay ary noho izany dia manan-danja amin'ny olona tsirairay izy.
Fa maninona no tokony hifidy?
Ny andraikitry ny chancelier federaly sy ny filoha federaly
Lisitry ny fanjakana federaly 16 any Alemana
Wie funktioniert die Präsidenten Wahl in den USA?
Fampianarana politika - Chancelier federaly sy ...